Ama-Benchmarks: Asebenza Kanjani Ama-Webinar Wakho? | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJuni 9, i-2015 Douglas Karr
Besivele sihlela i-webinar yethu elandelayo izolo futhi sixoxe ngamabhentshi athile mayelana nokuba khona, ukukhushulwa, nobude besikhathi… bese ngithola lokhu nje namuhla! I-ON24 ikhiphe uhlelo lwayo lowe-2015 lonyaka Umbiko we-Webinar Benchmarks, ehlaziya izitayela ezibalulekile ezibonwe kuma-webinar wekhasimende we-ON24 ngonyaka odlule.
Ukutholakala Kokhiye kwe-Webinar Performance Benchmarks
Ukusebenzisana kweWebinar - Amaphesenti angama-35% ama-webinars ahlanganiswe izicelo zokuxhumana, ezifana ne-Twitter, Facebook ne-LinkedIn, namaphesenti angama-24 ama-webinars asebenzise ukuvota njengendlela yokubandakanya ngqo amalungu ezethameli. I-Q & A ihlala iyithuluzi lokuxhumana elidume kakhulu kuma-82%.
Ukusetshenziswa Kwevidiyo yeWebinar - ibone ukunyuka okumangazayo, kusuka ku-9% ngo-2013 kuya ku-16.5% ngo-2014, ngenxa yokuvela kobuchwepheshe bevidiyo, izindleko ezincishisiwe, kanye nokukwazi ukusunduza ividiyo ngokuthembekile ngaphandle kwezingqinamba ze-bandwidth.
Usayizi Wezethameli zeWebinar - Kube nokwanda okuphawulekayo kuma-webinars amakhulu. Ngo-2013 kuphela i-1% yama-webinar adonse ababekhona abangaphezu kwe-1,000 2014, kanti ngo-9 ama-webinar ayi-1,000% adlulise uphawu olungu-1,000 XNUMX. Lokhu kwanda kusho ukuthi ama-webinar adonsela abantu abangaphezu kuka-XNUMX XNUMX awasenamikhawulo emicimbini ebanjwe ngamabhizinisi amakhulu.
Isikhathi Sokubuka - Izikhathi ezijwayelekile zokubukwa kwe-webinar ziyaqhubeka nokudelela ukuthambekela komkhakha nxazonke Ungadla okulula okuqukethwe okuheha ukunakwa okukhawulelwe kubanga. Uma kuqhathaniswa nesilinganiso semizuzu engama-38 ngo-2010, ukubukwa kwe-webinar bukhoma kukhuphukile ngokuqinile futhi manje kubambelele 56-imizuzu mark, ekhombisa ukuthi ama-webinars aqhubeka nokukhula ngokubaluleka njengoba abathengi bezifundisa njengoba besebenzela isinqumo sokuthenga.
Izikhathi Zokubuka - Ama-webinars abanjwe ngoLwesithathu nangoLwesine ahamba phambili kakhulu, alandelwa eduze ngoLwesibili. ENyakatho Melika, ama-webinars abanjwe ngo-11: 00 am PT / 2: 00 pm ET anenani eliphakeme lababekhona.
Ukuhambela Ukuqhathanisa - Phakathi kuka-35% no-45% wababhalisile bama-webinars wokumaketha baya emcimbini obukhoma. Leli zinga lokuguqulwa libambe ngokuqinile iminyaka eminingana.
Tags: ubude besikhathi be-webinarisilinganiso sobude bewebhuON24Ukubakhona kwe-webinarUkubakhona kwe-webinar kuqhathaniswa nokubhaliswausayizi wezithameli we-webinaramabenchmark webinarubude bewebhuubude bewebhuamabenchmark wokumaketha we-webinaramabenchmarks wokusebenza kwe-webinaramamethrikhi wokusebenza kwe-webinarukubhaliswa kwe-webinarusayizi we-webinarUkusetshenziswa kwevidiyo ye-webinarizinsuku zokubuka iwebhuizikhathi zokubukwa kwe-webinar